Mozika klasika : Hankalaza ny faha-10 taonany ny Chœur d’homme de Madagascar -
AccueilVaovao SamihafaMozika klasika : Hankalaza ny faha-10 taonany ny Chœur d’homme de Madagascar
Mozika klasika : Hankalaza ny faha-10 taonany ny Chœur d’homme de Madagascar
13/01/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Tarika iray hivondronana mpanakanto lehilahy maromaro. Hankalaza ny faha-10 taonany ny Chœurs d’hommes de Madagascar, izay naorin’i Ando Ny aina Razananaivo, ary hiarahan’i Hasina Rakotonindrainy sy Lova Raoelison mitantana. Ho fisantarana izany, dia hisy ny seho goavana atolotr’izy ireo etsy amin’ny Alliance Française Andavamamba (Aft) ny 27 janoary izao. Nampiavaka ny Chœur d’Hommes de Madagascar hatramin’ny niorenany ny fanehoana ireo mozika klasika araka ny fomba miavaka amin’ny maha fivondronana mpihira lehilahy azy. Anisan’ireo efa hiangalian’izy ireo tamin’ireo fampisehoana maromaro nataony ny sanganasan’ireo andrarezin’ny mozika klasika eo amin’ny hira fiderana raha tsy hitanisa afa-tsy ry Goundo, Liszt, orff… Toa izany koa anefa ny sanganasan’ireo mpanakanto malagasy manana ny lazany, ary mbola be mpankafy hatramin’izao toa an-dry Mahaleo, Lôlô sy ny tariny… ankoatra ireo, mandritra io fampisehoana io, dia hamelona indray ireo mozika klasika malagasy nohavaozina ny tarika Chœur d’hommes de Madagascar.
Anisan’ireo tarika malagasy be mpankafy ary manana ny lazany ao anatin’ny mozika klasika ny chœur d’hommes de Madagascar, ary tao anatin’izay 10 taona izy, dia maro ireo hetsika goavana efa nandraisany anjara toa ny hetsika iraisam-pirenena « Classik’art », ny festival Symphonie tany Nosy Be… Anisan’ny teny filamatra nijoroan’ny tarika tao anatin’izay 10 taona izany ny hoe « Ny arivolahy mihira indray andro »